समाज Archives - News36media
September 16, 2020 September 16, 2020 News36mediaLeaveaComment on फेरि मलेसियाबाट भाइरल भयो यी चेलीको अश्लिल काण्ड (भिडियो सहित)
पार्कमै युवक र युवतिले यस्तो गरेको अहिले निकै भाइरल हुँदैछ यो केही दिन पहिले मात्र भको घटना हो बाकी भिडियो हेर्नुहोस.. यो पनि पढ्नु होस.. एजेन्सी – महिला तथा पुरुषका रु’चि एवं विशेषता फरक–फरक हुन्छन् । महि’लाहरू यौ ‘न साथीसँग खुलेर न’बोले पनि उनीहरू पुरुषले आ फूले न’बताई आफ्नो म नको कुरा बु’झिदिऊन् भन्ने चाहन्छन् […]
September 13, 2020 News36mediaLeaveaComment on सुर्खेतमा घ;ट्यो घि’नलाग्दो घ’टना; साथीको जन्मदिन मनाएर फर्किँदा बालिका ब’ला’त्कृत
आइतबार २८ भदौ २०७७ सुर्खेत -सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका –४, बरैचेकी १४ वर्षीया बालिका ब’ला’त्कृ’त भएकी छन् । पञ्चपुरी –९, विद्यापुरमा साथीको जन्मदिन मनाएर घर फर्किदै गर्दा बाटोमा ब’ला’त्कृ’त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घर्तीले जनाकारी दिए । भदौ २४ गते राति ११ बजे घटना भएको र २५ गते बिहान परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय […]
September 11, 2020 September 11, 2020 News36mediaLeaveaComment on पहिलो पटक जातीय विभेद गर्नेलाई जेल चलान
जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा गुल्मीमा पहिलो पटक जिल्ला अदालतले पीडकलाई ३ महिना जेल सजायको फैसला गरेको छ । जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ फोक्सिङ्गका नेत्रबहादुर काउछा मगरलाई छुवाछुत तथा जातीय विभेद गरेबापत् न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतिको ईजालासले ३ महिना जेल सजायको फैसला गरेको हो । काउछा मगरले गत जेठ २३ गते दिउँसो मलामी गएर फर्किने क्रममा अविरल […]
September 11, 2020 News36mediaLeaveaComment on जस्तालाई त्यस्तै: आफ्नो श्रीमती भगाउनेकै श्रीमती भगाईदिए
तपाईं दीपक हो ? हो, किन ? म जितबहादुर दर्नाल, कतारबाट किन मेरी श्रीमती लानुभा’को ? लगेँ, तँ सक्छस् भने मेरी पनि लगेर देखा । यो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा रहेका मोरङ, उर्लाबारी ६, मंगलबारेका जितबहादुर दर्नाल तथा सोही गाविस वडा नम्बर ९ का दीपक नेपालीबीचको फोन वार्ता हो । वैदेशिक रोजगारीमा डेढ वर्षअघिदेखि कतारमा […]
September 10, 2020 September 10, 2020 News36mediaLeaveaComment on फेसबुकको love : इन्जिनियर हुँ भन्दै बिहे गरेको केटो १० कक्षा पास मात्रै !
इलाम घर भई ललितपुर बस्ने शिला शर्मा (नाम परिवर्तन)को करिब एक वर्षअघि रमेशप्रसाद तिमल्सिनासँग फेसबुकमार्फत चिनजान भयो । फेसबुक च्याट हुँदै उनीहरू साथी बने । तिमल्सिनाले आफू हाइड्रो इन्जिनियर भएको र ठूलो कम्पनीमा काम गर्ने बताएका थिए । त्यही ‘प्रोफाइल’का आधारमा युवती उनीसँग निकट भएकी थिइन् । भर्चुअल दुनियाँबाट झन् नजिक हुँदै उनीहरू भेटघाट गर्न […]
September 9, 2020 September 9, 2020 News36mediaLeaveaComment on लो’ग्ने भनेको स्वा’स्नीको शरीर ब’लिया हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ’ – सुष्मा
काठमाडौँ। ५ बर्षकी छोरीकी आमा भै सकेकी एकजना सफा च’रित्रकी साथीले पहिलो पल्ट मलाई सुनाई के गर्नु यार सुष्मा बुढो आफूलाई पुगेपछि उता पट्टी फर्कीएर मज्जाले सुत्छ, आफूलाई नि’न्द्रै लाग्दैन । केही महिना पछि उसलाई फोन गर्दा उसले अर्को स’मस्या सुनाई खोई के भको हो यसलाई केटीसंग पल्केर हो की के हो मेरो र छोरीको […]
दोहोरी गायिका कबितालाइ श्रीमानले कुटी कुटी घरबाट निकालिदिएपछि रुदै मिडियामा (भिडियो)
September 4, 2020 September 4, 2020 News36mediaLeaveaComment on दोहोरी गायिका कबितालाइ श्रीमानले कुटी कुटी घरबाट निकालिदिएपछि रुदै मिडियामा (भिडियो)
लाइभ दोहोरीमा सबैले रुचाएको एक महिला कलाकारमा कबिता लामा पनि पार्छिन । झट्ट हेर्दा लाग्छ उनि पारिवारिक जीवन देखि सबै कुरामा खुसि र आनन्दित छिन तर भित्रि रुपमा बुझ्दै जादा उनको अबस्था नाजुक रहेछ जुन कुरा पहिलोपटक मिडियामा पोखेकी छिन कविताले । इन्द्रेणी को लाइभ दोहोरी देखि बिभिन्न मिडियाहरुमा दोहोरी खेलेर रमाईलो गर्ने कविताको जिन्दगी […]
भर्खरै नर्भिक अस्पतालबाट आयो अत्यन्तै दुखद खबर !
September 4, 2020 September 4, 2020 News36mediaLeaveaComment on भर्खरै नर्भिक अस्पतालबाट आयो अत्यन्तै दुखद खबर !
काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालमा उपचारार्थ एक जना कोरोना संक्रमितका परिवारले अस्पतालले आफुसंग चर्को मुल्य असुलेको बताएका छन् । वीरगञ्जका ४५ वर्षीय एक जना पुरुषको उपचारमा नर्भिकले चर्को शुल्क असुल गरेको आफन्तले बताएका छन् । दमको बिरामीलाई उपचारका लागि बौद्ध अस्पतालवाट रेफर गरेर नर्भिक ल्याइएको विरामीसंग नर्भिकले चर्को शुल्क असुलेको हो । गण्डकस्थित बौद्ध अस्पतालमा गरिएको […]